Iipakethe zezithonjana zeTattoo zezilwanyana ezingama-35 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe Photoshop brushes isinceda ukuba sisebenze ngokulula kuyilo lwethu kwaye silondoloze ixesha elininzi. Ukuba uyilo apho ucinga ukusebenzisa khona Iitato, tribal or if you want to add a tattoo to a photographer to see how it would look or give it a more "hard" look, these brush pack that I bring you today are going to enchant you.
Lilonke zizinto zonke Imiqulu engama-35 yeebrashi ze tattoo for Adobe Photoshop Uyilo olwahluke kakhulu onokuzikhuphelela kwaye ulisebenzise simahla kuyilo lwakho.
Ngaphakathi iibrashi ze tattoo unokufumana izilwanyana ezinje iingcuka, iinyoka, izingwe neempungutye, uyilo yesizwe ngeendlela ezahlukeneyo, ii-bangles, iminqamlezo, tattoos of Ikofere Kwaye njl njl njl.
Ndikucebisa ukuba uthathe uhambo kwaye ujonge iipakethi ezingama-35 zeebrashi ze tattoo kwaye ngokuqinisekileyo enye yazo ilungile kuyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iibrashi » Iipakethe ze icon ezingama-35